Home > Family Newsletter > September > Somali
PILLSBURY PRIDE NEWSLETTER
Qoysaska sharafta leh ee Dugsiga Hoose Pillsbury,
Sanad dugsiyeedkeenu waxaa uu ku biloowday wanaag! Todobaadyadii ugu horeysay waxay noo ahaayeen kuwo aad u wanaagsan waxaana la is baranayey ardayda ku cusub dugsiga hoose Pillsbury iyo soo dhaweynta ardaydeenii hore. Jimcihii la soo dhaafay waxaa si rasmi ah u sameeyney xafladeenii shumac bidhaminta. Waxaana shumaaca daaraya hal arday oolaga soo xushay dhamman fasalda heer kasta leh. Ka eego sawirka xafladaan bogga hore ee wargeyskaan!
Mudo shan iyo labaatan sano ka hor ayaa shaqaalaha iyo ardayda dugsiga –Pillsbury ayaa waxay ku aruuriyeen waxaayo taariikhi ah gantaal u sameysan dayax gacmeedka, waxaana rabnaa in aan ogaano waxyaabahaas taariikhiga ah ee lagu aruuriyey gantaalkaas u sameysan sida dayax gacmeedka bisha Okoober! Maalinta Khamiista oo ay bishu tahay, October 11, 2018 dhammaan ardaydii hore iyo ardayda hada dhigta dugsiga hoose ee Pillsbury waan ku casuumeynaa in ay daawadaan marka la furaayo qalabkaas ku dhex jira gantaalka. Waxaana rajeynayna in ay noqoto xaflad aad u xiiso badan!
Waxaan ku faraxsanahay in ay qoysaska dugsigeena ay ka qeyb qaataan howlaha waxqabadka dugsiga, waxaana jira siyaabo badan oo ay uga qeyb qaadan karaan.
* ururka waalidiinta/iyo macalimiinta (kulan kooda ugu horeeya waa Talaadada, bisha September 18 at 5:00 PM)
* ESSA/North Star Accountability Team (waqtiga la kulmayo wali lama cayimin; Ms. Skowronek ogaysii hadii aad doonaysid in aad ka qeyb qaadatid)
*Tabaruc ama tabarucaada fasalka
* Gudiga la talinta (bishii hal mar talaadada labaad saacaduna waa 5:00 PM)
* Ka qeyb qaadashada xafladaha qoysaska
Waxaan rajeynayaa in aan isku aragno dhamman xafladahaoo dhan!
Maamulada ************************************************************************************* Wargeyska High Five
Wow, Waxaa si wanaagsan noogu bilowday sanad dugsiyeed cusub! Waxaan dhammaanteen ku faraxsanahay inaan dugsiga ku jirno, inta badan ardaydeeyda waxay ku jiraan sanadkii ugu
horeeyey oo ay ku waayo arkayaan dugsiga. Waxayna aad uga shaqeynayaan in ay wax bartaan, raacaan jadwalkooda, raacaan tilmaamaha, iyo in ay sameeystaan saaxiibo.
Fasalka High Five, ardayda waxay baranayaan ciyaarta iyo mowduuc ku saleysan hab raac.
Mowduuceena ugu horeeya: Ku soo dhaweynta dugsiga! Dhammaadka bisha September, ardaydu waxay baran doonayaan13xarumaad oo waxbarasho kala duwan, kuwaas oo ku xiran mowduuca waxbarashada. Ardaydu waxay wax ku baran doonaan heesida iyo xarakaadka, kaas oo ka caawin doona maskaxdooda in ay shaqeyso ayna wax barato. Waxaan heysanaa modo 3 saacadood oo waxbarasho iyo waxyaabo kale oo ad u xiiso badan!
Waxaan rajeynayaa in aan ku kulano shirka waalidiinta, si aan kuula wadaago waxyaabaha wanaagsan ee uu ilmahaagu baranayo!
Ku soo dhowaada Kindergarten Pillsbury! Waxyaabaha la barto bisha ugu horaysa ee sanad- dugsiyeedka waa.
* Sayniska waxaan baranaynaa heerarka nolosha. Waxaan darsaynaa sida dirindiirtu u korto , ugxan ilaa ay balanbaalis ka noqoto...ardayduna aad bay u xiiseynayaan! Fasal walba wuxuu darsayaa geed dugsiga ku ag-yaala siyaabaha uu isu bedelo sanadka oodhan. MArka xige ee aad dugsiga timaado, cunugaaga waydii inuu ku tuso geedka ay daraasaynayaan!
Cilmiga Bulshada waxaan baranaynaa shuruucda: Mas’uul Noqo- Muxtarim Noqo- Amaan Ahoow. Waxaan kaloo baranaynaa in Baska si nabadgelyo leh loo raaco.- Hees nabadgalyada baska ku saabsan baan qaadaynay, cunugaaga waydii, laxanku waa mid la yaqaan !
* Xisaabta , waxaan baranaynaa qaababka walxuhu isu raacaaan, barashada lambarada iyo tirade, iyo sida ay lamabaradu macno u sameeyaan anagoo ku dabakhayna shaqooyinka kalendarka. Dhowaan waxaan bilabaynaa xalinta xisaabta anagoo isticmaalayna I-pads!
* LITERACY Waa qeyb muhiim u ah dugsiga gaar ahaan fasalada Kindergarten. Waad ku caawin kartaa guriga adiga oo u sameeynaya waqti go’an oo ay aqriyaan buugg maalin kasta. Ardayda Fasalka Kindergarten waxaa laga filaayaa inay maalin kasta ku aqriyaan buugg mudo 20 daqiiqo ah inta ay guriga joogaan. Isku day in uu ilamaaga kuu aqriyo ama aad agiga u akhridid buugga. Daraasaad la sameeyey ayaa sheegaya in ay ilmaha aad u kororto guushooda dugsiga!
Ku soo dhawaada dugsiga Pillsbury! Ms. Bove, Ms. Hitchcock, Mrs. Pierskalla
Fasalada 1aad si wacadarao leh ayay ku bilowdeen! waxaan ku mashquulsananyn sidaan u darsi lahayn jadwalkayaga isuna baran lahayn. Imtixaanaad baan qaadnay si aan u ogaanao heerka wax- akhris ee arday walba marayo. Arday walba waxaa la siiyay danbiil uu buugta uu xiisaynayo ku gurto, si uu u isticmaalo xiliga wax-akhriska degan. Dhinaca Xisaabta, waxaan samaynaynay Xisaabta kaalendarka, iyo lamabaro la isu geeyayay. Ardaydu aad bay uxiisaynayaan cutubka Sayniska , iyago eegaya kala-soocayana noocyada ay dhagxantu ukala baxdo iyadoo lagu salaynayo qaababkooda. Bishan, waxaan bilabaynaa inaan shaqo-guri soo dirno jimco walba, isniintana la soo celiyo, fadlan ku boori cunugaaga inu dhameeyo shaqada guriga ama layliska loo soo diro. Sidoo kale, fadlan wax la akhri cunugaaga maalina walba. Waxaan filaynaa bil wanaagsan oo waxbarsho leh. Fadlan hadaad wax tabanayso ama su’aal qabto nagala soo xidhiidh.
Sharon Goetzen (119) Sharon.Goetzen@mpls.k12.mn.us Kellen Gill (118) Kellen.Gill@mpls.k12.mn.us
Fasalada labaad waxay baranayaan heerarka nolosha cayayaanka. Fasal walba wuxuu haystaa dirxi cyaaayan ah oo ay darsaan sida uu u dhaqaaqo, waxa uu cuno, iyo marxaladaha uu maro ugxan ilaa qaangaadh.
Safarkii sanadlaha ahaa ee aan ku tegi jirnay Minnesota Landscape Arboretum Apple Orchard ayaa ahaa Arbacadii, September 19. Waxaan baranay noocyada tufaaxu u kala baxo iyo waxyaabaha muhiimka u ah bixida tufaaxa, iyo kalmada qeexaya tayada tufaaxa.
Way mahadsanyihiin qoysaskii soo celiyay waraaqihii la soo buuxinayay. Fadlan isqor kulanka waalidiinta iyo macalimiinta ee Oktoobar dhacaya..
Waad ku mahadsantihiin in aad caruurtiin keentaan waqtiga dugsigu bilowdo. Fasalka ayaan ku quraacanaa, ka dibna waxaan aadnaa fasalada khaaska ah 7:40.
Waxaan idiinka mahadnaqaynaa inaad nala-wadaagtaan waxbarashada ilmihiina. Ms. Parker, Ms. Torrez-Gutierrez and Mrs. Robinson
Waxaa nagu soo kordhay Ms. Asha, oo shaqada la wadaagaysa Ms. Kathryn. Ms. Kelly waxay dhigaysaa(2nd-4th), Ms. Jennie waxay dhigaysaa(3rd-5th), Ms. Kathryn iyo Ms. Asha oo wada-dhigaya (K-1st) dhamaan waxaan rajaynaynaa sanad kale oo xiiso iyo waxbarasho leh! Nasiib wanaag waxaa ah inay soo noqdeen Kalkaliyaashii waxbarashada Khaaska ah sida: Ms. Devon, Ms. Sabrina, Mr. Pierre, Ms. Sam, and Ms. Elsie! Wax kaloo aad ugu faraxsanahay Mr. Mike oo nagu soo biiray !
Muhiimadayadu waa sidaan maalin walba uga dhigi lahayn mid xiiso, waxsoosaar iyo wadajir leh. Dhamaan ardaydu waxay tagaan fasalada waxbarashada guud waqtiyo kala duwan. Sidoo kale dhamaan ardaydu waxay helaan waxbarasho khaas ah sida ku salaysan hadafka waxbarshada shaqsiga ah (IEP). Kulamada Waxbarshada Shaqsiga ah (IEP) ayaa sanadkii mar la qabtaa, aad baan ugu bogaadinaynaa in aan la kulano waalidiinta in ay noo saamaxaan inaan la kulano!
Ku soo dhowaada Dugsiga Pillsbury! Sanadkan waxxna haysanaa 21arday oo ukala baxa fasalada kindergarten ilaa 5aad!
Ms. Kathryn, Ms. Asha, Ms. Kelly & Ms. Jennie
Fasaladda 5 naad waxay ku bilowdeen si wanaagsan. Waxaan baranaynaa saan wadjir ugu shaqaynlahayn aanuna isu baran lahayn . waxaan bilownay habka idku-dhufashada xisaabta oo si hufan loo baranayo. Waxaan kaloo baranaynaa wadiiqooyinka iyo hababka noo sahlayo wax- soosaar suurta gal ah. Maalin-joogayaga ugu horeeyaa waxaan ugu baxaynaa Beerta Xayawaanka Dayrtan.
Waalidiintu waxay ka caawin karaan inay abaraan iskudhufashada, sababata oo ah xisaabta aan dhigano badankeedu waxay ku salaysanthay iskudhufashada. Sidoo kale, hubi in cunugaagu wax akhriyo maalin walba. Ardayda wax-akhriska badan baa guulo sare gaadha.
Waad ku mahadsantahay inaad cunugaaga us oo dirtay Pillsbury aadna nagu aamintay inaan siino cunugaaga fursado waxbarasho. Waxaan rajaynaynaa inaan idinla kulano shirka waalidiinta iyo macalimiinta.
Tara Fagerlee and Joel Lurvey Macalimiinta Fasaladda 5naad ee Pillsbury
Kus soo dhowaada sanad-dugsiyeedka 2018-2019 waxaan biloownay Qolka Shaybaarka STEAM Lab! Magacaygu waa Glory Oljace, aad baan ugu faraxsanahay inaan la shaqeeyo ardayda iyo qoysaska Pillsbury sanadkan.
Todobaadkii mar,ayuu cunugaagu imanayaa qolka 207 iyadoo lagu baranayo cilmiga Sayniska STEAM. Erayga STEAM waxaa loo soo isticmaalaa dhinaca waxbarashada Sayniska, Tiknoolijiyada casriga ah, Injineernimada, Farshaxanka iyo Xisaabta
Fadlan soo booqo qolka 207 iyo shaybaarka – waa meel xiiso badan!
parents dropping students off only. If you are going to enter the school with your child,
please park in the lot and cross the street at the corner.
4th and 5th Grade Farmer’s Market Bike Ride
—Pillsbury Day (MN United vs. NYCFC) at TCF Stadium
—Time Capsule Open House